Dhaqdhaqaaqyada kooxaha xagjirka ah oo soo kordhaya - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Dhaqdhaqaaqyada kooxaha xagjirka ah oo soo kordhaya
La daabacay tisdag 25 juni 2013 kl 17.00
Waxaa caadi noqotay in kooxaha taabacsan afkaarta xagjirnimada iyo cunsuriyadda ku dhisan ay dhaqdhaqaaqyadoodu Iswiidhen ku soo bataan. Sidaasna waxaa warbixintiisii sannadka ku soo qoray ururka Expo oo baaritaano ku sameeyey dhaqdhaqaaqyada kooxaha midabtakoorka aamminsan.
Habab kala duwan ayey kooxahaani warbixinahooda u faafiyaan. Waxaana hababkaas ka mid warqado iyo qoraalo ay qaybiyaan iyo iyagoo qabanqabiya kulamo aqoon-isweydaarsi ah. Uurka Expo oo ah urur dadweynaha ku wacyigeliya arrimaha la xiriira cunsuriyadda iyo ajnebi-nacaybka ayaa baaritaan ku sameeyey dhaqdhaqaaqyada kooxahaas xagjirka ah. Wuxuuna baaritaankiisa ku ogaaday in dhaqdhaqaaqyada kooxahaasi ay boqolkiiba 20 sare u kaceen. Anders Dalsbro oo ka socda ururka Expo wuxuu sheegay in uu jiro xisbi si gaar ah ugu hawllanaa kor u qaadidda dhaqdhaqaaqyada kooxaha xagjirka ah.
- Waxaan soo aragnay in ay dhaqdhaqaaqyadaasi inta badan la xiriireen ururka la magaxbaxay Xisbiga Iswiidhen. Xisbigaan oo aad u kordhiyey dhaqdhaqaaqyadiisa sannadkii 2012 ayaa hadda ah ururka ugu cadcad marka laga hadlayo cunsuriyadda midabtakoorka ku dhisan. Wuxuuna ku guuleystey in uu ururka ku soo biiriyo xubno farabadan.
Wuxuu kaloo Expo sheegay in dhaqdhaqaaqyada kooxaha taabacsan midabtakoorka iyo jinsi-faquuqu ay soo kordhayeen wixii ka dambeeyey sannadkii 2008. Kooxahaas soo batay waxaa ka mid ah xisbiga iswiidhishka oo ay ciidamada nabadsugiddu ku tilmaameen in uu yahay urur aamminsan fikirka in caddaanku dunida ka taliyaan. Sababta uu xisbigani hadda xoogga u soo yeeshayna waxaa loo aaneynayaa xilligii doorashada oo soo dhowaatay, sida uu sheegay ururka Expo.
Baaritaanka uu sameeyey ururka Expo wuxuu ku dhisan yahay dhaqdhaqaaqyada ay kooxahaani ku soo bandhigaan shabakadaha internet iyo qalabka warbaahinta rayidka. Sidaas awgeedna waxaa adag in cabbir sax ah lagu sameeyo.
Dhanka kale waxaan natiijada baaritaanka la yaabin Hans Brun oo ka hawlgala kulliyadda militeriga iswiidhishka iyo jaamacadda Kings College oo ku taal London. Caalinkaan oo cilmi-baaris ku sameeya kooxaha xagjirka ah, wuxuu qabaa in kororka dhaqdhaqaaqyada kooxaha xagjirka ah ay sabab u noqon karto kooxahaas oo beddeley habka ay u shaqeeyaan.
- Waxay dadaal ugu jiraan in ay koobiyeeyaan habkii uu xisbiga Sverigedemokraterna guusha ku gaarey, taas oo ku dhisan in ay hoos u dhigaan dhaqankooda ku dhisan argagaxa iyo cabsida oo ay sidaas awgeed ku xalaaleeyaan hadafkooda siyaasadeed.
Hans Brun wuxuu intaas ku daray in ay jiraan meelo ay fikirkooda ku faafiyaan oo ay dad doorta ka kasban karaan. Kolka waxay ku khasban yihiin in ay isu ekeysiiyaan kuwo u taagan afkaar caadi ah.